Hong Kong Airlines Told To Improve Finances or Risk Losing Licence | Myanmar Business Today
Home Business Regional Hong Kong Airlines Told To Improve Finances or Risk Losing Licence
Hong Kong Airlines, controlled by cash-strapped Chinese conglomerate HNA Group, must shore up its financial position by December7or risk the suspension or loss of its license,aHong Kong air transport regulator said on Monday.
It said if the conditions are not met,adecision on whether to suspend or revoke the airline’s license will be announced by December 7.
The airline said on it would further reduce capacity, suspending flights to Vancouver, Ho Chi Minh City and Tianjin.
On Saturday, the carrier said on its website that its in-flight entertainment system would be out of service until further notice. ($1 = 7.8249 Hong Kong dollars)
တရုတ်နိုင်ငံ လုပ်ငန်းစု HNA Group ၏ လက်အောက်ရှိ Hong Kong Airlines အနေဖြင့် ၎င်း၏ ဘဏ္ဍာရေးအနေအထားကို ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားကာ ထောက်ကူရှာဖွေရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက လိုင်စင် ရပ်နားခံရခြင်း၊ ပြန်သိမ်းခံရခြင်းတို့နှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဟောင်ကောင် လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ဆိုသည်။
The Air Transport Licensing Authority (ATLA) က ဟောင်ကောင်၏ ဒုတိယအကြီးဆုံးသော လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်သည့် Hong Kong Airlines အနေဖြင့် ငွေကြေး ရှာဖွေရန်နှင့် ‌လက်ဝယ်ထားရှိသည့် ငွေကြေးကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ထိန်းထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ထားကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အကယ်၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါက လေကြောင်းလိုင်း၏ လိုင်စဥ်ကို ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်းကို ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမည် ဖြစ်သည်။
Hong Kong Airlines ကတော့ ATLA ၏ သတ်မှတ်ချက်အသစ်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာရှင်များ၊ အခြားသော ရှယ်ယာရှင်များနှင့် ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးနေကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွေက ပုံမှန်အတိုင်းရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခရီးသည်တွေကို သူတို့သွားလာမယ့်ခရီးစဥ်တွေကို ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာနဲ့ ပို့ဆောင်ပေးဖို့ သန္နိဋ္ဌာန်ချမှတ်ထားပါတယ်” ဟု ကြေညာချက်ထဲတွင် ပြောဆိုထားသည်။
အဆိုပါ လေကြောင်းလိုင်းမှာ စတော့အိတ်ချိန်း စာရင်းဝင်‌ကုမ္ပဏီမဟုတ်သကဲ့သို့ ဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာထားခြင်းမရှိပေ။ သို့သော် ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလတွင်တော့ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံ (အမေရိကန်‌ေုါ်လာ ၂၅၆ သန်း) လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ်ပါက ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလိုင်စင် ပိတ်သိမ်းခံရနိုင်ကြောင်း ရှယ်ယာရှင်များကို ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် လေကြောင်းလိုင်းအနေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံမျှအရုံးပေါ်နေကြောင်း အဆိုပါ ရှင်းလင်းပွဲတွင် တက်ရောက်ခဲ့သူများက ဆိုသည်။
ဟောင်ကောင်၏ Transport and Housing Board ကတော့ ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့က လေကြောင်းလိုင်းနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လေကြောင်းလိုင်း၏ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေများ တိုးတက်မရှိသည့်အပေါ် စိတ်ပျက်၊ စိုးရိမ်မိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ် တနင်္လာနေ့က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Previous articleCBM Buys U.S. Dollars to Prop Up Value
Next articleBOJ’s Reflationist Board Member Sees No Need for More Policy Steps